Shaxaha Rasmiga Ah Ee Belgium vs Italy - De Bruyne & Chiellini Oo Soo Laabtay Iyo Xiddigaha Dagaallamaya - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaShaxaha Rasmiga Ah Ee Belgium vs Italy – De Bruyne & Chiellini Oo Soo Laabtay Iyo Xiddigaha Dagaallamaya
Shaxaha Rasmiga Ah Ee Belgium vs Italy – De Bruyne & Chiellini Oo Soo Laabtay Iyo Xiddigaha Dagaallamaya
Quwadihii Yurub ee loo saadaalinayay inay ku guuleysanayaan tartanka Euro ayaa midkood macasalaamaynayaa caawa, waxaana foodda is daraya Belgium iyo Italy oo ka mid ahaa waddamada ugu awoodda badan.
Xulka qaranka Talyaaniga ayaa durduro ku yimid wareegga siddeedda iyagoo soo wada badiyey dhamaan afartii ciyaarood ee ay illaa hadda dheeleen, waxaanay kulankii ugu dambeeyey kasoo adkaadeen Austria oo kualnkooda lagu daray waqti dheeraad ah.
Belgium ayaa iyaguna waxay gool madi ah kaga soo badiyeen xulka qaranka Portugal, waxaase guushaas ugu lammaanayd dhaawacyo kasoo gaadhay labada ciyaartoy ee Edin Hazard iyo Kevin de Bruyne, laakiin nasiib wanaag waxa dib ugu soo laabtay laacibka dambe
Tababaraha Belgium ee Roberto Martinez ayaa ciyaartan kusoo bilaabay Kevin de Bruyne oo kasoo kabtay dhaawacii kasoo gaadhay kuraanta ciyaartii Portugal, waxaanu caawinayaa Romelu Lukaku iyo Doku oo afka hore wada taagan.
Khadka dhexe ayay ka wada ciyaarayaan Thorgan Hazard, Tielemans iyo Axel Witzel, halka difaacana ay wada taagan yihiin Meunier, Vertonghen, Vermaelen iyo Alderweireld, kuwaas oo uu kasii dambeeyo Thibaut Courtois.
Roberto Mancini ayaa isaguna waxa uu kusoo bilaabay shax uu awoodda saaray khadka dhexe oo uu kusoo wada bilaabay Barella, Jorginho iyo Marco Verratti, halka uu weerarkana wada keenay Chiesa, Ciro Immobile iyo Insigne.
Difaaca ayaa waxa usoo noqday Chiellini oo dhaawac ku maqnaa, waxaanu garab taagan yahay Bonucci, Spinazzola iyo Di Lorenzo.
Shaxaha rasmiga ah ee labada xul